Iserị elu nke obere obere akpa nwa n'oge ọrịa na-efe efe | Martech Zone
Iserị elu nke obere obere akpa nwa toro ọrịa n'oge ọrịa na-efe efe
Tọzdee, Disemba 24, 2020 Tọzdee, Disemba 24, 2020 Tanya Singh
A na-atụ anya nha ahịa ịkwụ ụgwọ dijitalụ zuru ụwa ọnụ site na USD 79.3 ijeri na 2020 na USD 154.1 ijeri na 2025, na Compound Annual Growth Rate (CAGR) nke 14.2%.
Na nlọghachi, anyị enweghị ihe kpatara enwere obi abụọ na ọnụ ọgụgụ a. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ bụrụ na anyị edebe ya nsogbu coronavirus ugbu a n'uche, uto na ikuchi ga-eme osooso.
Nje virus ma ọ bụ enweghị nje, ndị ebilite na kọntaktị ịkwụ ụgwọ nọrịị ebe a. Ebe ọ bụ na wallets smartphone dina n'etiti otu sistemụ si arụ ọrụ, enwere ịrị elu pụtara na nnabata ha. Mana kamgbe akụkọ gbasara etu ego ga-esi buru coronavirus ụbọchị ole na ole gwụsịrị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla gafee ụwa agbanweela obere akpa.
Mana gịnị na-eme ka obere akpa mkpanaka bụrụ chi-ziga ọzọ na ego ego? Azịza nke ajụjụ a dị na njirimara setịpụrụ. Nke a bụ ndepụta nke atụmatụ nke obere akpa mkpanaka kwesịrị inwe:
Ga-Enwe Akụkụ nke Mobile Wallets
Multi-akpata Nyocha Nche - Akụkụ mbụ nke obere akpa dijitalụ ọ bụla ga-enwerịrị bụ nchebe enweghị nchebe. Otu ụzọ iji hụ na nke ahụ bụ site na nnabata nke usoro nyocha ọtụtụ ihe. Ihe ọ pụtara na-eme ka ndị ọrụ gafee ọ dịkarịa ala 2-3 elele nchedo nche tupu ha eruo ebe ha nwere ike ịlele nhazi akaụntụ ha ma ọ bụ zigara ndị ọgbọ ha ego.
Usoro Systemgwọ Ọrụ - Otu n’ime ihe ndị kachasị eme ka ndị mmadụ jiri obere akpa dijitalụ dị ka PayPal ma ọ bụ PayTM bụ ụgwọ ọrụ ha. Maka azụmahịa ọ bụla ndị ọrụ na-eme site na ngwa ahụ, a ga-enye ha ụgwọ ọrụ, nke nwere ike ịbụ n'ụdị Kupọns ma ọ bụ cashback. Naanị nke a nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji mee ka ndị ọrụ laghachi na ngwa ahụ.
Otu Nkwado Na-arụsi Ọrụ Ike - Otu mkpesa ndị ọrụ na-enwekarị na ụlọ akụ ha bụ otu ha nwere ike isi ghara ịnọ ọrụ n'oge mkpa. Mgbe n'ime ngwa akpa, enwere ọtụtụ ihe nwere ike imehie maka onye ọrụ - ha nwere ike zigara onye na-ezighi ezi ego ahụ na mberede, ha nwere ike itinye ego na-ezighi ezi, ma ọ bụ ego kachasị ọnụ ahịa akụkọ ma ọ bụghị iru onye ahụ ezubere. Iji dozie nsogbu ndị a na ọnọdụ nke paranoia na ezigbo oge, ekwesịrị inwe akụrụngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Ugbu a anyị lebara anya na atụmatụ ndị na-eme ka obere akpa dijitalụ mara ama, ka anyị gbadaa ruo isi ihe kpatara anyị ji chee na ịrị elu ịrị elu na ojiji nke obere akpa mkpanaka gafee ụwa.
Ihe kpatara kpatara ọgba aghara a ji ebili na obere akpa
Egwu ịnwụ nje ahụ - N'ihi ụjọ na ha ga-ejide coronavirus, ndị ọrụ na-ezere iji ego ego. Mana nke a anaghị egosi ịrị elu na obere akpa dijitalụ? Ebe ọ bụ na ha nwere ike iji debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ ha oge niile. Ọfọn, nke ahụ bụ isi. Ndị ọrụ na-ezere ịmetụ ihe ọ bụla aka - igwe igwe, igwe POS, ma ọ bụ igwe ọ bụla ọzọ nke ga-enyere ha aka ịme azụmahịa. Nke a bụ isi ihe mere ha ji tinye uche ha na obere akpa dijitalụ contactless.
Ozi ka ukwuu - Ihe ọzọ na - arụ ọrụ maka ịkwado ịkwado obere akpa mkpanaka bụ etu esi amata ndị ọrụ fintech banyere uru ọ ga - enye. Kemgbe nkwado nke obere akpa ruru steeti ya, ndị ahịa (nke gụnyere ọtụtụ puku afọ) amatala otu esi eji ha na otu ha si dị ọtụtụ isi karịa iji ego ego. Klas nke otu puku afọ nke ndị ọrụ esorokwa akụkụ dị ukwuu n'ịkụziri Generation X na Boomers ihe mere o ji bụrụ oge ịhapụ ego ego.
Nnukwu nnabata - Taa, enweghi ike inwe ụlọ ọrụ azụmaahịa ọ bụla, ụlọ ọgwụ, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ndị na-anụbeghị ma ọ bụ anaghị eji obere akpa ego dijitalụ. Nnabata a emeela ka ịrị elu site na njedebe ndị ahịa. Oge ka nma ghara iburu ego ma obu ihe puru efu nke itinye ego ma obu kaadi kredit agbakwunyere na nnabata nke obere akpa eji eme ihe emeela ka ndi mmadu tinye onu ego.
Nkwado nke teknụzụ - Ihe ọzọ nke nwere ma ka na-eweta ịrị elu nke ịnabata obere akpa mkpado bụ nkwado teknụzụ. Companieslọ ọrụ obere akpa mkpanaka dịka Stripe, PayPal, wdg na-ejide nka iji nye ngwa ntinye aka 100%. Tụkwasị na nke a, site na ijikọta ngwa ahụ na API nke na-eme ka ha bụrụ otu nkwụsị ikpo okwu maka ntinye akwụkwọ na mkpa niile, ụlọ ọrụ na-eji akụkụ ọrụ aka ha arụ ọrụ ka mma iji nweta ahụmịhe ndị ahịa, ma n'aka nke ya, ndị ahịa ha na-aza site na ịgbanweta ha site na obere akpa ego ha.
Kedu otu onye ọchụnta ego Fintech Kwesịrị Isi Zaghachi?
Ezigbo azịza nke onye ọchụnta ego Fintech ga-enwerịrị ngbanwe a na omume ndị ahịa kwesịrị ịchọ ụzọ iji gbasaa na ụdị azụmaahịa. Otu ihe ha gha achoputara bu na nrapu ndi mmadu na-acho ịbụ ihe omuma ohuru. Dịkwa ka azụmaahịa ọ bụla dị n'okpuru anyanwụ, ha onwe ha kwa ga-elebanye anya n'ụzọ iji mee ka ahụmịhe ndị ahịa ha dịka onye na-enweghị ike ịkpọtụrụ ha.
Anyị nwere olile anya na rue oge a, ị gaara enwe ike ịlele otú mkpa wallets mobile abụrụla ndụ onye ọ bụla na otu ọ bụ naanị ụzọ dị n'ihu maka ngalaba Fintech.
Site n'olileanya ahụ, ka anyị hapụ gị otu okwu nkewa:
N'ebe dị ugbu a, ịkwụ ụgwọ na-enweghị ego bụ ụzọ dị mkpa iji chebe onwe gị na ndị ọzọ megide mgbasa nke coronavirus. Onu ogugu kaadi enweghi ike bu ihe di egwu, agbanyeghi, ebe o kwere omume anyi na agba ndi ahia anyi ume ka ha jiri obere akpa dijital n’ihi na ha nwere nchekwa echekwasighi nke itinye PIN na PIN Pad n’agbanyeghi ego ha n’eme, kama leverages aka ID ma ọ bụ Face ID.
Kate Crous onye isi njikwa nke 'ụlọ akụ kwa ụbọchị' na Commonwealth Bank nke Australia
You na-eche na obere akpa mkpịgha ụgha na ọdịnihu nke ngalaba fintech? Ekekọrịta echiche gị na ihe ndị dị n'okpuru.
Tags: Commonwealth bank nke Australiaịkwụ ụgwọ kọntaktịego dijitalụụgwọ ọrụ dijitalụobere akpa dijitalụobere akpafintechKate mara mmangwa ahiaugwo ugwoobere akpa mkpanakamobile obere akpa ngwaekwentị mkpanaakanyocha ọtụtụ iheugwo ama
Tanya bu onye ahia ahia mara amara nke nwere ihe kariri afo ise nke ihe omuma na teknụzụ ndi ozo dika ngọngọ, Flutter, Intanet nke Ihe n'ọhịa nke ngwa ngwa mkpanaka. N'ime afọ ndị a niile, ọ gbasoro ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ma ugbu a ọ na-ede banyere ihe ọhụrụ na-eme na ụwa nke ngwa.